पूर्वराष्ट्रपति यादवलाई क्यान्सर | Jwala Sandesh
पूर्वराष्ट्रपति यादवलाई क्यान्सर
| प्रकाशित मितिः सोमवार, भदौ १३, २०७३ ::: 210 पटक पढिएको |
काठमाडौं, १३ भदौ । पूर्व राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवलाई थप ६० लाख रुपैयाँ उपचार खर्च दिने निर्णय गरेको छ ।
गणतन्त्र नेपालका प्रथम राष्ट्रपति यादवलाई क्यान्सर भएको छ । हालै भारतमा गरिएको स्वास्थ्य परीक्षणका क्रममा यादवलाई प्रोस्टेट क्यान्सर देखिएको हो ।
थप उपचारका लागि उनी अमेरिका जाने तयारीमा छन् । उनको निजी सचिवालयका अनुसार यादवको सेम्टेम्बर तेस्रो हप्ता हेनरीफोर्ड सेन्टरमा उपचार हुनेछ ।
पूर्व राष्ट्रपति यादवको उपचारका लागि सरकारले थप ६० लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको छ । यो रकम पेश्की मात्र हो । र, यादवको सबै उपचार खर्च सरकारले नै व्यहोर्नेछ । चिकित्सकहरुका अनुसार यादवको उपचारमा ३ करोडभन्दा बढी खर्च लाग्नेछ ।
सरकारले पूर्व राष्ट्रपति डा. यादवलाई ६० लाख उपचार खर्च बाहेक जाने-आउने विजनेश क्लासको टिकट, दैनिक ३०० डलर भत्ता पनि दिनेछ । साथै उनका तीन जना सहयोगीलाई हवाइ टिकट र दैनिक १५० डलर दैनिक भत्ता दिने सरकारको निर्णय छ ।
नेहरु अस्पतालमा परीक्षणका क्रममा पूर्वराष्ट्रपति डा. यादवलाई क्यान्सरको पुष्टि भएको छ । चिकित्सकहरुका अनुसार शल्यक्रिया पश्चात उनको क्यान्सर निको हुनेछ । तर, समयमै शल्यक्रिया गर्नुपर्ने हुन्छ । नभए संक्रमण फैलिने खतरा हुन्छ ।